Maqaalo | Jamaame News Network
Wax Tarka Nabadda Gobolka shabeellaha Hoose
Go’aankii kasoo yeedhey Mudane General Cabdullaahi Waafow , waa mid ka tarjumaayo ,marxaladda la joogo,
Canshuur lagu soo rogey shisheeyaha jooga dalka Sacuudiga .
Boqortooyada ayaa kusoo rogtey lacag dhan RS100./=us$27, laga billaabo 1/7/017, kaasi oo sanad walbo kordhidoono ilaa RS.400=us$107.
Xaraf Alifka kasoo xumaadey Albaqra kama tooso Mudnayaal.
Wararka maanta ayaa ku xusan in uu dhacay shir 3 geesood ah, ee ay ku kulmeen, mudanayaasha hoggaanka dalka oogu sarreeyo.
Shaley iyo Maanta iyo sheekada shabeellaha Hoose
Beryahaanba waxaan ka baadey qowl iyo qoraal, qalin iyo xaanshi , qisooyinka geyga Somaaliya oo gebi ka dhac u muuqday ayaan la juuqi waayey.
Maxaadan ka Aqoon Xaram Makkah
Sannad walbo waxaa usoo sahay qaato boqolaal kun oo Muslim ah, si ay u gutaan waajibka Xajka amase Cimrada, saa darteed maamulka arrimaha laba Xaram(makkah iyo Mediinah) waxay u diyaariyeen waxii u sahal yeeli lahaa, inay waajibkooda gutaan . waxaana ka mid ah, waxyaaba Xaramka gudahiisa amase bannaankiisa loogu qabto, waxaana ka mid ah: 1- Xaram Makkah waxaa gudahiisa halkii marba ...
Jaaliyadda Koonfur Galbeed oo shirey.
Maanta oo ah jimco 26/08/2016 , ayaa waxaa qabsoomey shirkii labaad ee ay u woda dhanyihiin dadweynaha ku abtirsada maamulka Koonfur Galbeed. Shirkaani ayaa ka dhacay xaafadda Sabiil ee magaalada Jeddah dalka Boqortooyada Sacuudiga, waxaana soo qabanqaabiley Guddoomiyaha jaaliyadda Koonfur Galbeed mudane Cumar Boongo. Shirkaani ayaa waxaa ka qeyb galey Indheer garad, Aqoonyahanno, Odey dhaqameed, Salaadiin, Ugaasyo, culumaa’uddiin. Shirkaani ayaa ...
Dhul gariir ku dhuftey bartamaha dalka Talyaaniga.
Xaley waaberigii waxaa dalka Talyaaniga ka dhacay dhul gariir lagu qiyaasey 6.2 qiyaasta Rekhter, taasi oo dhalisey dhimisho cagacageeynaaya ilaa 250 ruux , isla markaana dhowr kun ay ku guryo beeleen. Dhul gariirkaani ayaa dalka Talyaaniga intiisa badan laga woda dareemey, kaasi oo dadka ka dhigey woda debed jiif , ka dib markii uu gariirka dhacay waaberigii Xaley. Dhul gariirkaani ...
Soomaaliya iyo Soomaalidu ma kuwa is leh baa!! Mise?
Weydiintaani waxaa daba raac ku sameen kara qofka jecel runta inuu ku noolaado, qofkiise riyo iyo naf been lagu hago jecelse, qoraalkaani hoos yuusan u raacin, waayo ma noqondoono mid uu ku farxo amase uu jecleysto. Soomaaliya waa dal ay ku noolyihiin ummad loo aqoonsadey inay gumeysigu ka xurowdey 1960kii bishii lexaad lex iyo labaatankeeda, calanka buluugga ahna ka taagey ...
Aqriso: Tacadigii Jaamac Balow Uu Ka Geystay Deegaanka Gaawarow
aamac yuusuf warsame (jaamac Balow ) oo kamid ahaa maleeshiyada ka soo duushey Gobolka Mudug ayaa waxa uu xoog ku heystey Beer waayn oo ku taala degaanka Gaywirow . waxaa uuna dhibaato faro badan u geesty Shacabka reer Gaaywirow oo ahaa dad beero falato ah iyo xoolo dhaqato ah. Beert uu heysatey Jaamac Balow ayaa waxaa iska lahaa dad gaywirw ...
(Xog) Shirkada Hormuud Qaabkee Ayey Dagaalka Sh/Hoose Ugu Qeyb Qaadataa?
Shirkada Hormuud oo soo shaac baxday bur burkii kadib sidoo kale la soo jaan qaaday jabhadii USC oo uu hogaaminaayey Ceydidd aadna ula soo shaqeeyey xaga isticmaalka lacagaha iyo maal galinta ajandayaasha uu raway, Ceydiid Jernal Caydiid waxa uu dhankiisa ka balan qaaday in uu dhabarka u rito fulinta wax alaale waxa ay rabto Hormuud kana difaacayo cadowkasta oo hunguriyeeya ...